Ludger Andrianjaka | GAZETY_ADALADALA
Posted on 12/02/2010 by gazetyavylavitra
Raha tsy diso aho dia i Ludger Andrianjaka no niventy ity hira ity voalohany tamin’ny feo mangany sy avo dia avo.
‘zay navelan’ny razako…
Foiko ho anao ny aiko…
Ny ranomasina no valam-parihy
mamefy ny Foko rehetra hifankatia…
Madagasikara ho an’ny Malagasy
Malagasy kosa ho a’ni Madagasikara.
Andinindininy vitsy fotsiny ihany ireo notsongaiko ireo. Ary ireto roa farany no tena mba tiako hotsindriana mafimafy kokoa.
Tena mifamatotra marina ve izy roa ireo sa mpifamofo mbola afaka mifampifilafila ihany? Raha ny zava-misy mantsy dia tsy masi-mandidy eo amin’ny tany navelan’ny razany ho azy ny Malagasy fa ny vahiny no tena mifehy sy mitazona ny lamboridy, ka toy ny soavaly voatampi-maso ny ‘olona rehetra noheverina ho mpitondra manam-pahaizana’ teto amin’ity tanindrazantsika ity.
Angamba ilay toe-tsaina mihitsy koa no tokony hofafana (truncate na drop – raha fiteny amin’ny tontolon’ny haitao anglisy) fa toa zary mbola mitampisaka ao foana ilay misolelaka sy tsy maintsy miantsy ‘approbation’ avy amin’ny vahiny vao afaka, na vonona hanatanteraka zavatra. Marina amin’ny lafiny maro io. Toa tsy mba misy izay ‘hazondamosina Malagasy’, fa i Jean Ping izao no toa Filoham-pirenen’i Madagasikara.
Ny fitenenana an’ireo tsy midika hoe tsy tokony hihainon y hafa ny Malagasy, fa fotsiny, tiana hapetraka ny hoe ianareo mpanao politika (na liona tanora, na voaibe, na dinaozoro, na tsy haiko koa…), mba farito aminay Malagasy ny tena ataonareo hoe ‘Fitiavan-tanindrazana. Fanina ny maro, ary ny aleo dia tsorina fa asangodinareo ho fanina ny maro.
Miseho lany ankehitriny ny savoritaka anivon’ny sehatra maro (dokotera, tafika, orinasa, halatra sy endaka eny anaty fiarahamonina, sns…) Ka apetraka ny fanontaniana hoe, tratranareo ve ny tanjonareo? Sa tratra ny tanjon’izay naniraka anareo? LMifanipaka toa valala an-karona ny mpiray ‘vilia’ sy ‘vodirindrina’.
Ny tombontsoan’ny besinilmaro no aoka hojerena mandrakariva, sao tonga amin’ilay fiteny taloha hoe ‘Tetiteteho fa ratsy fanahy’, satria ny tantara dia mbola mitohy ary ny tantara dia mbola hitsara.
Fa tsy sanatria hoe ho toy ny fahatsiarovana sisa izay rehetra mandalo eto amin’ity firenena ity ka izay vita dia ifamelana avy eo, na atao ‘dossi’rs classés’. Isan’ny tsaroana manokana amin’izany izay nitranga 35 taona lasa izay (11 febroary / fevrier 1975), ka namonona ana’i Richard RATSIMANDRAVA, nefa tsy mbola nisy nipika ihany izay fandehan’ny fanadihadiana. Toa izay tokony ho vavolombelona aza dia maty amin’ny fomba tsy hay daholo ny ankamaroany. Ny boky na izay soratra navelan’i Mopera Remi Ralibera indray izao no andrasana hoe inona no tena raketiny momba iny raharaha iny.
Veloma ihany ny aina, hahita izay antenaina.
Hioty ny soa tsy ho lany, hiadam-pinaritra hatrany.
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, fifandraisana iraisam-pirenena, politika, tapatapany, tsingerina | Tagged: 11 febroiary 1975, 11 fevrier 1975, Ludger Andrianjaka, Madagasikara, Malagasy, Ratsimandrava, remi ralibera |	Leave a comment »